Naadiga Naadiga ayaa caan ku ah una soo jeestaa inuu noqdo Jano isku xirta dadka ku nool Warshadaha Xashiishadda • Dawooyinka Inc.eu
Naadiga Naadiga waa mid caan ah oo cadeynaya inuu yahay janno isku xirta kuwa ku jira warshadaha xashiishka
Haddii aad la kulanto casuumaad lagu sameeyo Clubhouse, dheh haa.
1 Waa maxay sababta barnaamijka cusub ee warbaahinta bulshada ee loo yaqaan 'Clubhouse' sidaas ugu guuleysto?
2 Qaar ka mid ah qolalka ClubHouse ee ugu caansan ganacsiyada xashiishka?
Clubhouse - barnaamijka cusub ee warbaahinta bulshada ee si gaar ah diiradda u saaraya tooska, kal-fadhiyada waqtiga-dhabta ah - waa goob firfircoon oo lagu kulmo warshadaha xashiishadda laakiin ka dib internetka. Weli wali beta, caan ku ah barnaamijka ayaa qarxay sanadkii la soo dhaafay. Naadiga Naadiga ayaa ka socday 1.500 oo isticmaaleyaal ah Maajo 2020 ilaa 10 milyan oo isticmaaleyaal ah bishii Febraayo 2021. Ka dib wareegii taxanaha ahaa ee maalgelinta ee bishii Janaayo ee sannadkan, shirkadda waalidka ee Clubhouse ee shirkadda Alpha Exploration Co. qiime dhan $ 1 bilyan.
Naadiga Clubhouse wuxuu bixiyaa qolal maqal ah oo lagu rido oo isku ekeysiiya kalfadhiyada hadalka. Marka laga hadlayo warshadaha xashiishadda, waxaa sidoo kale loo yaqaan fadhiyada dhijitaalka ee dhijitaalka ah. App-ka ayaa lagu amaanay inuu yahay goob kulmiyaan VC-yada iyo dadka caanka ah. Elon Musk xitaa wuxuu wadahadal la galay bilowgii sanadkaan. Intii weli beta ku jirta (sidoo kale sababta ay u tahay casuun-keliya), barnaamijku wuxuu caan ku noqday xirfadleyda oo ay ku jiraan xashiishka iyo warshadaha hemp lixdii bilood ee la soo dhaafay.
Waa maxay sababta barnaamijka cusub ee warbaahinta bulshada ee loo yaqaan 'Clubhouse' sidaas ugu guuleysto?
Qayb ka mid ah sababta guusha hadda jirta ee aadaa? Warshadaha xashiishka waxay ubaahanyihiin xiriir iyo isku xirnaansho la'aanta shirar shaqsiyeed, dhacdooyinka iyo fursadaha isku xirnaanta. Waa meel aamin ah, gaar ahaan maadaama tilmaamaha bulshada aysan si firfircoon u takoorin ereyada xashiishadda sida barnaamijyada kale ee warbaahinta bulshada. Instagram, oo ay iska leeyihiin Facebook, iyo TikTok waxay leeyihiin sharciyo adag oo ka dhan ah wadahadalka ka socda warshadaha xashiishka. Naadiga Clubhouse wuu soo dhaweynayaa. Martine Francis Pierre, oo ah aasaasaha shirkadda Xakamaynta.
"Runtii waxaan rumeysanahay in maqalka la soo tuuro uu yahay mowjadaha soo socda ee warbaahinta bulshada tobanka sano," ayuu yiri Francis Pierre, oo aad u jeclaa guryaha naadiga tan iyo bishii Oktoobar 2020. Waan jeclahay in dadka raacsan aysan macno u lahayn Clubhouse. Waxaan sidoo kale jeclahay xaqiiqda ah inaanan dareemin cadaadis la igu qasbayo inaan noloshayda ku noolaado. Waxaan ku biiri karaa bulsho dhan markasta oo aan doono iyada oo aan kor u qaadin astaanteyda sida Instagram. “
Fursadaha isku xirnaanta ee ClubHouse "waxay dareemeen wax badan oo ka macno iyo waxtar badan inta badan baraha bulshada," ayuu yiri Francis Pierre. Qareenka iyo suuqleyda dhijitaalka ah waxay u arkaan qiimaha fudeydka, maadaama aysan u baahnayn fiidiyoow ama muuqaal muuqaal ah oo ku saleysan muuqaalka sida Zoom, TikTok ama Instagram Live. Xaqiiqda ah inaan kaliya u adeegsado codkeyga si aan uga qeyb qaato waxay ka dhigeysaa guuleyste cad.
Qaar ka mid ah qolalka ClubHouse ee ugu caansan ganacsiyada xashiishka?
Waxaad kaheli doontaa wada sheekeysi xashiishad hoostiisadaawada neefsashadas ee ku yaal qolka in yar: "Qaybta Sigaar cabista", qol ka kooban 11,5 kun xubnood oo kulmaya 16:20 PM (aaga waqtiga PST). Waxa kale oo jira "Smk Brk" oo loogu talagalay haweenka jecel cawska, "Cannabis", oo ay xubno ka yihiin 217 xubnood oo diiradda saaraya isku xidhka, sheekooyinka iyo dawada dhirta. Qol caan ah oo ku yaal ClubHouse waa "Sida Loo Galay Warshadaha Cannabis" oo ay la socdaan 25.000 xubnood oo kulmaya Jimce kasta 16:20 PM (EST + PST time zone). Green Street sidoo kale waxay martigelisaa “Donuts iyo Pizza” subaxa Jimcaha.
ClubHouse waxay bixisaa qolal kulan oo khadka tooska ah leh oo cod maqal ah lagu beddelan karo isku xirka (afb.)
Qolalka waxay kuxiran yihiin doodaha shatiga xashiishadda, suuqgeynta, siyaasadda, beerashada, sinnaanta, dhedignimada iyo waxkastoo udhaxeeya. Waxqabadka Clubhouse wuxuu ku dhacaa warbaahinta: waa inaad ku biirtaa qolalka inta lagu jiro waqtiyada loo qorsheeyay. Dadku way imaan karaan waana tagi karaan waqtiga gudahooda, iyagoo siinaya dadka isticmaala ikhtiyaarka ah inay "si aamusnaan ah uga baxaan" markay rabaan inay ku galaan qolalka kale si dijitaal ah. Qol kasta wuxuu leeyahay qaabeeye 'weydiisan kara' isticmaaleyaasha cusub inay hadlaan.
Haddii aad hayso wax aad tidhaahdo tani waa meel wanaagsan oo laga sheego. Waxaa jira dhibaatooyin qaar ay wali shirkaddu isku dayeyso inay xalliso. Marka hore, astaanta barnaamijka waxay kuxirantahay nambarkaaga taleefanka, markaa hadaad ubaahantahay lambar cusub, waxaad ubaahan doontaa inaad sameysato oo aad sameysato koontadaada koontada 'Clubhouse' meel lagasoo bilaabo. Sidoo kale, waxaa heli kara oo keliya isticmaalayaasha IOS oo aan wali laga helin Android.
“Waxaan badanaa adeegsaday Clubhouse si aan ula xiriiro dad kale oo ka socda warshadaha xashiishka,” ayuu yiri Johnson - xubin ka tirsan Ururka Warshadaha Cannabis ee Qaranka. "Waxaan jeclahay inaad la soo xiriiri kartaan oo aad runtii kala hadli kartaan xashiishadda iyo horumarkiisa aqoonyahanno adduunka ku nool."
Nooca ugu caansan ee Clubhouse waa in aysan jirin wado lagu badbaadiyo dhacdooyinka. Ilaa aad duubto mooyee, oo kaa raba inaad ka codsato ogolaansho qolka ka hor intaadan sameyn, waxa ku jira ayaa ku lumaya mowjadaha marka qolku dhammaado Malaha taasi waa qeyb ka mid ah waxa barnaamijka ka dhigaya mid aad u xiiso badan oo aysan jirin hab lagu badbaadiyo? Si ka duwan sida buugaagta loo yaqaan 'podcast', waxaa la heli karaa muddo gaaban oo weligood laguma keydin doono iyo farahaaga. Uguyaraan, waa "Cabsida Maqnaanshaha" (FOMO) ee abuureysa buunbuunin halkan.
Taasi waa quruxda Clubhouse - waxay ku dhacdaa oo keliya xilligan la joogo.
Ilaha ay ka mid yihiin Cannacon (EN), CNBC (EN), Forbes (EN), GrownIn (EN), NCIA (EN)
cannabiswarbaahinta bulshadaisbeddelladaAdduunka oo dhan
Sidii maalgashankan loo yaqaan 'Wall Street' ee maalgashaday laftiisu wuxuu u noqday sheeko guul ah oo balaayiin doolar oo ku jirta cannabis
Maamulaha guud ee shirkadda Kevin Murphy ayaa si weyn wax u qiimeeyay markii uu ogolaaday inuu iibiyo shirkadiisa xashiishadda, Acreage ...
Isticmaal xashiishada cannabis: xanuujin xanuunka aan lahayn kaniiniyada
Toddobaadkii hore, Xarunta Macluumaadka Sunta Qaranka (NVIC) ayaa soo warisay in sanadkii la soo dhaafay tirada xad dhaafka ah ee ...
Bangkok, Thailand - Si kor loogu qaado horumarinta alaabada marijuana ee caafimaadka, waddamada xubnaha ka ah Qaramada Midoobay ee Thailand waxay qaateen qiime-hoose ...